Nhau - Reusable girazi bhodhoro
Pakave nemabhodhoro egirazi munyika yangu kubvira kare. Munguva yakapfuura, madenderedzwa edzidzo vaitenda kuti giraziware raive risingawanzoitika munguva dzekare, saka rinofanirwa kunge riri rayo chete uye richishandiswa nemazana mashoma ekutonga. Nekudaro, ongororo dzichangoburwa dzinotenda kuti yekare giraziware haina kunetsa kugadzira nekugadzira, asi hazvisi nyore kuchengetedza, saka hazviwanzo muzvizvarwa zvinotevera. Girazi regirazi chinhu chinwiwa chinwiwa kurongedza mudziyo munyika yangu, uye girazi zvakare rudzi rwekuputira zvinhu zvine nhoroondo refu. Nemidziyo mizhinji yekupakata ichidira mumusika, midziyo yegirazi ichiri kutora chinzvimbo chakakosha mune yekumwa chinwiwa, icho chisingapatsanurike kubva kune ayo ekurongedza maitiro ayo zvimwe zvekutakurisa zvinhu zvisingakwanise kutsiva.
Iko kushandiswa kwegirazi kugadzira midziyo yekupakata ine nhoroondo refu, uye kugadzirwa kwakakura kwemaindasitiri emabhodhoro egirazi uye magaba yanga iri nyaya yeanoda kusvika makore zana. Semidziyo yekupakira, mabhodhoro egirazi uye magaba ane zvakawanda zvakanakira, senge yakawanda mbishi zvinhu, mitengo yakaderera, kujekesa kukuru, uye kugadzikana kwemakemikari kwakanaka. Inofema, haichinje ruvara, inogona kuvhurwa nekuvharwa kakawanda, uye inogona kudzokororwazve nekushandiswazve; kunyangwe ichitetepa uye ichirema, mabhodhoro egirazi uye magaba zvagara zvichikosha mumidziyo yekupakata. Iko kushandiswa kukuru kwemabhodhoro egirazi uye magaba zvishoma nezvishoma kwaita kuti kugadzirisazve kwayo uye kushandisa zvakare kuve kwakakosha. Kazhinji kutaura, kumisikidza uye kushandiswazve kwemabhodhoro egirazi nemakani zviri nyore pane kurongedza midziyo yakagadzirwa nezvimwe zvinhu, uye zvinongoda kucheneswa zvisati zvashandiswazve. Iyo indasitiri yegirazi inoshandisa zvakare girazi remarara sezvinhu zvakagadzirwa, izvo zvine zvakanakira zvakatipoteredza. Simba rinogona kuderedzwa. Inodya 4% kusvika 32%, inoderedza kusvibiswa kwemweya ne20%, inoderedza marara emamineral ne50%, uye inoderedza kushandiswa kwemvura ne50%. Kutanga kubva pakuchengetedza nharaunda uye kuchengetedza zviwanikwa, nyika kutenderera pasirese dzinotsigira kudzokororazve kwemabhodhoro egirazi nemakani.
Iyo yekudzokororazve vhoriyamu yemabhodhoro egirazi iri kuwedzera gore rega rega, asi iyi yekudzokorodza huwandu hwakakura uye husingaenzanisike. Zvinoenderana neGirazi Packaging Association: Simba rakachengetedzwa nekudzokorodza bhodhoro regirazi rinogona kuita 100-watt mwenje girobhu kuvhenekera kwemaawa angangoita mana, kumhanyisa komputa kwemaminetsi makumi matatu, uye kutarisa maminetsi makumi maviri ezvirongwa zveTV. Naizvozvo, kudzokororazve girazi inyaya inokosha zvakanyanya. Girazi bhodhoro rekushandisa zvakare rinoponesa simba uye rinodzora marara emagetsi ekurasa marara, ayo anogona kupa zvimwe zvigadzirwa zveimwe zvigadzirwa, kusanganisira mabhodhoro egirazi echokwadi. Maererano neNational Consumer Plastic Bottle Report yeChemical Products Council yeUnited States, angangoita mabhiriyoni maviri nemazana maviri emamiriyoni emabhodhoro epurasitiki akashandiswazve muna2009, aine huwandu hwezvekudzokorodza hwe28% chete. Kudzokorodza mabhodhoro egirazi ari nyore uye anobatsira, zvinoenderana nemaitiro ebudiriro ekuvandudza, anogona kuchengetedza simba uye kuchengetedza zviwanikwa.